Mabda 'Artron COVID-19 IgM / IgG Antibody Test waa tijaabinta immunochromatographic assay ee baaritaanka isku mar iyo kala-soocida unugyada IgM & IgG ee fayraska COVID-19 ee unugyada bini'aadamka, Plasma, ama sambalka dhiigga oo dhan.
Waxaa loo adeegsan karaa qalliinka iyo daaweynta bukaanka.Inspection of ka hortagga faafida meelaha dadweynaha; Faafinta meelaha faddarayn; waxaa loo adeegsaday militariga, caafimaadka, kiimikada, ilaalinta deegaanka, gaadiidka, ka hortagga cudurka faafa iyo qeybaha kale.
Daawooyinka loo yaqaan 'Aprons' waxay ka hortagaan cabitaannada, dufanka iyo saliidaha. Farsamaynta wanaagsan, qurxinta, wax soo saarka, dhismaha iyo nadaafadda iyo isticmaalka maalinlaha ah.
Go'doominta Magaalada PE1003B
Shaybaarka, jikada, dhammaan noocyada aagggu waxay u baahan yihiin difaac dareeraha dhexdhexaad ah.
Biyo-caddeyn, Dust-proof, oil-proof
Waxaa loo isticmaalaa nolol maalmeedka. Waxaa loo adeegsan karaa xafiiska shaqada, jikada, wadada roobka, xaflada weyn, kulanka iwm Ilaalinta sharafta leh ee ilaalinta gaasnimada wajiga, waxaa si weyn looga isticmaalaa bangiyada, shaqaalaha gaadiidka, maqaayadaha, iyo goobaha dadweynaha; ka ilaali isticmaalaha inuu ku buufiyo wasakhda wejiga ee nolol maalmeedka iyo shaqada. Isla mar ahaantaana, gaashaanka wejiga ayaa leh waxqabadka anti-fog wuxuuna siiyaa aragti cad.
Go'doominta Magaalada PE1003
Shaybaarka, jikada, dhammaan noocyada aagggu waxay u baahan yihiin difaac dhexdhexaad ah oo adkaysiga u adag
Go'doon Gay E
Dharka go'doonka ee la tuuro
Go'doon Gaara A
Iyada oo laba-qaybood-koofiyad saddex-geesood leh la gooyey iyo weel dabacsan oo ku wareegsan furitaanka wejiga, guntinku wuxuu sifiican ula jaan qaadi karaa qaabka wejiga wuxuuna sare u qaadaa saameynta ilaalinta.
Dharka Caafimaadka ee la tuuri karo, Biyo-caddeynta Biyaha, Biyaha-Proof Hdpe Apron, Dharka Ilaalinta, Dust-Proof Pet Face Shield, Go'yaal ilaalin ah,